सुरक्षा निकाय Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - उपरथी बढुवामा कार्यविधि उल्लंघन, सेनापतिले ढाँटे !
विशेष प्रतिनिधि काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सहायक रथीबाट उपरथी बढुवाका बेला आफैले बनाएको कार्यविधि उल्लंघन गर्दै कनिष्ठलाई बढुवा गरेको तथ्य खुलेको छ । रक्षा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई झुटो विवरण देखाएर सेनापति थापाले सहायक रथी नैनराज दाहालको बढुवा रोकेको तथ्य खुलेको हो । इन्दिरागान्धी खुल्ला विश्वविद्यालय ( ओपन युनिभर्सिटी ) बाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका सहायक रथी दाहाललाई ‘अनलाइन स्नातक’ उत्तीर्ण भन्दै झुटो विवरण देखाएर उनलाई बढुवाबाट वञ्चित गराएको तथ्य खुलेको छ । उपरथी बढुवाका लागि वार कलेज/नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) अनिवार्य मानिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्
विशेष संवाददाता काठमाडौं । घुसखोरी र बदनाम प्रहरी खोज्न आर्इजीपी सर्वेन्द्र खनालले एसपीको कमाण्डमा सुराकी परिचालन गरेपछि नेपाल प्रहरीभित्र भुइँचालो गए जत्तिकै भएको छ । एआर्इजीपी, डीआर्इजीपी तथा एसएसपी तहकै अधिकृतमाथि गोप्य निगरानी गर्न १ नम्बर गण (नक्साल)का गणपति एसपी सन्दीप भण्डारीको नेतृत्वमा आर्इजीपी खनालले गोप्य टोली खटाएपछि प्रहरीभित्र हलचल मच्चिएको हो । निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि भएको हत्यापछि प्रहरीको बिग्रिएको छवि उकास्न र आन्तरिक शुद्धिकरण गर्न भन्दै आर्इजीपी खनालले गत महिना मार्सल टोली गठन गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार/हत्या प्रकरणमा बखास्त गरिएका नेपाल प्रहरीका निलम्बित एसपी दिल्लीराज बिष्टले अनलाईन र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर समाचार तथा सूचना प्रवाह हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बर्खास्तमा परेका एसपी बिष्टले अनलाईनका अनियन्त्रित समाचार र सामाजिक सञ्जालका पोष्टका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती मात्रै नाअएको भन्दै उनले संगठित अपराधलाई पनि बढवा दिएको बताएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
निर्मला हत्या अनुसन्धानमा गल्ती भेटिए बर्दी खोल्न तयार छु : प्रहरी महानिरीक्षक
काठमाडौं । निर्मला हत्याका विषयमा आफूले कुनै कमजोरी नगरको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् । निर्मलाको केसमा कुनै शंकास्पद भूमिका आफुले गरेको भएबर्दी खोल्न तयार रहेको खनालले बताए । संसदको सुशासन समितिमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै खनालले कंचनपुरकी १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको अनुसन्धानमा आफूले कुनै पनि कमी कमजोरी नगरेको उनले बताए । उनले अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी आफूले भूमिका निर्वाह नगरेको समेत बताएका छन्। सांसदहरूले पछिल्लोपटक कुखुरा चोरलाई दोषी देखाउने कोसिसमा प्रहरी लागेको त होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
सीमा नाका झुलाघाट हिँडेका १ सय ६० जवानलाई मिलेन सीमानामा जाने अनुमति
बैतडी । गत असोजमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा तथा सीमारक्षाका लागि हिँडेको सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म नेपाल भारत सीमा नाका झुलाघाट जाने अनुमति नमिल्दा सदरमुकाम गढीमा नै बसेको छ । सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा तथा सीमारक्षा गर्ने उद्देश्यसहित यहाँ आएको सशस्त्र प्रहरी बल विगत तीन महीनादेखि सदरमुकाममै बसेको छ । सरकारले सबै जिल्लामा सशस्त्रको उपस्थिति गराउने निर्णयानुसार यहाँ पहिलोपटक गुल्म स्थापना गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सुकेधारास्थित सुधार गृहमा प्रहरीको छापा !
काठमाडौं । राजधानीको एक सुधारगृहमा प्रहरीले छापा मारेर २१ जनाको उद्धार गरेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुधारगृहमा लागूऔषध कारोबार भइरहेको आश‌ंकामा सुकेधारास्थित ट्रान्सफरमेसन नेपालमा बिहीबार साझ छापा मारेको हो। उक्त गृहबाट २१ जनालाई उद्धार गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाएको प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रवक्ता डीएसपी होमिन्द्र बोगटीले नेपालबहसलाई बताए । यसअघि पनि उक्त सेन्टरबाट १३ जना भागेका थिए। घटना बारे थप अनुसन्धान भैइरहेको डीएसपी बोगटीले बताएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
साँफे-मार्तडी सडक मर्मत गर्दै प्रहरी
बाजुरा । बाजुराको साँफे मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गत बार्जुगाडदेखि सदरमुकाम मार्तडीसम्मको २८ किमी सडकमा यस वर्षको बर्खाले निकै क्षति पु¥याएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगुवाइमा मर्मत गर्न थालिएको छ । साँफे–मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गतको बल्दे, दवारी, हरणेखोला, तिपाडा, ओलेना, पानीनाउला, थुवाकाँध र पावरहाउसदेखि मार्तडीको कारागार डिलसम्मको सडक बर्खाले पूर्णरूपमा क्षति पु्¥याएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बोहोरालाई सफाइ दिने आदेश गरेको हो । आदेशमा बोहोराले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर नभएको उल्लेख छ । विशेष अदालतले अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा डेढ वर्ष कैद सजाय बिगो र जरिवाना गरी रु ५३ लाख ६२ हजार बराबर असुल फैसला सुनाएको थियो । विसं २०६१ साउन २९ गते अख्तियारले बोहराविरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियोे ।	थप पढ्नुहोस्